LAYAAB: "Ninkeeda oo hinaasay ayaa sanka ka gooyay" - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaLAYAAB: “Ninkeeda oo hinaasay ayaa sanka ka gooyay”
Muddo dhan 10 asbuuc oo ay argagax ku jirtay, Zarka haatan waxaa u muuqata xoogaa rajo ah.
“Waxaan ku fraxanahay in aan dib u helay sankeyga, waana wax wanaagsan,” ayay ku tidhi dhakhaatiirtii u sameysay qallinka dib loogu kabay sankeeda.
Tacaddiga ka dhanka ah dumarka ayaa ah mid aad ugu badan dalka Afghanistan, waxaana daraasad dhawaan la sameeyay lagu ogaaday in 87 boqolkiiba haweenka dalkaas ay la kulmaan dhibaato ay kala kulmaa ragga, haddii ay ahaan lahayd mid xadgudub galmo iyo kuwa kaleba.
Waxyaabaha ugu daran waa weerarrada loo adeegsado aashitada ama mindiyaha ee dumarka lagula kaco. Waxaana tusaale u ah Zakra oo seygeeda uu mindi sanka kaga jaray.
Zarka ayaa BBC-da u sheegtay in markii muraayadda isku eegtay ay ogaatay in sankeeda uu haatan soo hagaagayo.
Waxaa xaaladda la tacaalay dhakhaatiir, kuwaas oo ku sameeyay qalliin qaatay saddex saacadood. Waxay sheegtay in kahor inta aanan qalliinka lagu sameynin uu sankeeda ahaa mid aan muuqaal wanaagsaneyn.